यसबाहेक, यदि तपाईं वास्तवमै लामो यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं एक-मा होटेलमा बस्न सक्नुहुन्छ. यस तरिकाले तपाईले युरोप-पार्कको धेरैजसो भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ, र सबै थीम भएका क्षेत्रहरूको अनुभव लिनुहोस्: अफ्रीकामा एडभेन्चरल्याण्डबाट ग्रिमको जादू गरिएको वन.
डिस्नेल्याण्ड मात्र छ 20 पेरिसबाट मिनेट टाढा. तपाईं पेरिस एयरपोर्टबाट यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ, वा Marne-la-Vallee चेसी ट्रेन स्टेशन.
कुनै परिवारले Efteling थीम पार्क को जादू सम्पूर्ण परिवारको लागि वर्णन गर्न पर्याप्त छैन, त्यसोभए तपाईंले नेदरल्याण्डमा छुट्टीको बेला यस थिम पार्कको लागि केवल समय बनाउनुपर्दछ.
त्यसैले, प्रत्येक एकल रोलरमास्टर, डु boat्गा, र यात्री ट्रेन विशाल लेगो टुक्रा द्वारा तैयार गरिएको छ. इ England्ल्यान्डको यो अद्भुत थिम पार्क बर्कशायरमा स्थित छ र लन्डनबाट आधा घण्टा मात्र.
एस्टरिक्स थिम पार्कमा तपाईले भव्य डिस्कोबेलिक्स फेला पार्न सक्नुहुन्छ र एक सुपर घुम्ने समय पाउन सक्नुहुन्छ, डल्फिन र भेट्नुहोस् अन्य जनावरहरू गाउँ Gaulois मा, र पक्कै पनि अन्य रोचक आकर्षणको मजा लिनुहोस्.
Fantasialand मा सबै बच्चाहरुको कल्पनाहरु साँचो मा आउँछ6शानदार संसारहरू. सबै संसारमा, तपाईं सबैभन्दा थ्रिलिंग सवारीको मजा लिन सक्नुहुन्छ, र प्रकाश र रंग को ठाउँ.